Forex mgbanwe udu emelitere: 11/04/2021 09:34
US dollar - Nigerian naira price ugbu a na Forex mgbanwe ahịa na 11 April 2021
09:34:46 (Forex ọnụego update na 59 Sekọnd)
Forex - isi ahia ahia. Ọnụego mgbanwe na-agbanwe kwa sekọnd iri atọ ọ bụla. Lezienụ anya US dollar ọnụego ugbu a n'ịntanetị. Na-egosi mgbanwe mgbanwe Forex na nkeji ọ bụla.
Forex trading chaatị Nigerian naira ka Dollar ebi 11 April 2021
Forex trading chaatị US dollar Ka Nigerian naira -ebi, 11 April 2021
Na webụsaịtị anyị ị nwere ike ịchọta eserese nke US dollar ka Nigerian naira ọnụego mgbanwe na 11 April 2021. US dollar ka Nigerian naira dị mma ilele na eserese a. Jiri eserese mgbanwe iji ghọta mgbanwe mgbanwe mgbanwe mgbanwe ngwa ngwa. Ihe ngbanwe ọnụego mgbanwe na-agbanwe na sekọnd iri atọ ọ bụla.
Tọghata US dollar Ka Nigerian naira US dollar Ka Nigerian naira Ọnụego mgbanwe US dollar Ka Nigerian naira ọnụego mgbanwe n'akụkọ ihe mere eme
Online trading US dollar (USD) na- Nigerian naira ugbu a
Anyị na-egosi ọnụego mgbanwe site na nkeji ruo nkeji. Mmụba nke US dollar (USD) na Nigerian naira ọnụego a bụ - 0.0000 NGN. Tebụl ahụ na-egosi ọnụego US dollar Nigerian naira ọnụego kwa nkeji. Anyị nwere tebụl ọnụ ahịa maka nkeji iri ikpeazụ iji kirie ihe dị mfe.
Online trading US dollar (USD) na- Nigerian naira awa ikpeazụ trading
Ọnụego mgbanwe kwa elekere na weebụsaịtị anyị. Uto nke US dollar (USD) gaa na Nigerian naira n'oge elekere a bụ - 0.0000 NGN. Tebụl ahụ na-egosi ọnụego US dollar Nigerian naira na elekere kwa elekere. Ọ dabara adaba iji jiri mgbanwe mgbanwe ọnụego mgbanwe kwa elekere.
Online trading US dollar (USD) na- Nigerian naira taa na-emekarị 11 April 2021
09:34 08:33 07:33 06:33 05:33 04:33 03:33 02:33 01:33 00:33